Wasiirka ku xigeenka Warfaafinta oo u jawaabtey Cali Maxamed Geedi kuna eedeyey in uu wado kicin – idalenews.com
Wasiirka ku xigeenka Warfaafinta oo u jawaabtey Cali Maxamed Geedi kuna eedeyey in uu wado kicin
Wasiir ku xigeenka warfaafinta Dawlada Federaalka Soomaaliya Cabdishakuur Cali Mire ahna ku simaha wasiirka oo wareysi siinayay Laanta Afka Soomaaliga ee BBCda ayaa si kulul oo cad ugu jawaabay kooxo siyaasiyiin oo fashilmay oo uu ka mid yahay Cali Maxamed Geedi oo mar raysul wasaare ka soo noqday dawladihii ku-meelgaarka ahayd ee dalka soo maray.
C/shakuur Cali Mire, ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed aysan u baahneyn kicin, qabyaalad iyo in dib loogu celiyo colaad sokeeye taasoo ay hormuud ka yihiin siyaasiyiinta daneystayaasha ah, sida uu sheegay wasiirka.
Wasiirka ayaa sheegay in beryahanba dawladu ka warheysay in kooxo siyaasiyiin ah oo xukun jacaylku madax maray lana shaqeeya cadawga ummadda Soomaaliyeed ay qas iyo fawdo ku abuurayeen shacabka.
“Runtii shacabka Soomaaliyeedna wuu ka dheregsan yahay inaanu waxba soo kordhineyn siyaasi daneyste ah.” ayuu yiri wasiir ku xigeenka warfaafinta.
“Dawladan xoog iyo inqilaab dalka kuma qabsan ee waxay ku timid kalsoonida ityo rabitaanka shacabka.” ayuu sii raaciyey wasiir ku xigeenka.
Hadalka Wasiir ku xigeenka Wasaarada warfaafinta ayaa imaanaya xili maalmihii lasoo dhaafay si is daba joog ah Cali Maxamed Geedi oo kamid ah Siyaasiyiin maalmahaan Nairobi isku bahaystay uu Doowlada Federaalka usoo jeedinayay eedeymo u muuqday kuwo dowladda la rabo in daaqada looga saaro.
Dowlada Ingriiska oo dadkeda buurbuuran u waydey daawo looga hortago cudurada buurida xad-dhaafka